प्रेषित २१ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
२१ अब भारी मन लिएर तिनीहरूसित बिदा भएपछि हामी जहाज चढेर सीधै कोस पुग्यौं अनि त्यसको भोलिपल्ट रोडस अनि त्यसपछि पटारा पुग्यौं। २ अनि त्यहाँ समुद्रपारि फोनिसिया जाने जहाज भेटेपछि त्यसमा चढेर आफ्नो यात्रा सुरु गऱ्यौं। ३ यात्राको दौडान हामीले साइप्रस टापु देख्यौं र त्यसलाई देब्रेतिर पार्दै हामी सिरियातर्फ लाग्यौं अनि टायरमा जहाजबाट मालमत्ता झार्नु पर्ने भएकोले हामी त्यहीं उत्रियौं। ४ त्यहाँ हामीले चेलाहरूलाई खोज्यौं अनि तिनीहरूलाई भेट्टाएपछि सात दिन त्यहीं बस्यौं। तब पवित्र शक्तिको मदत पाएर ती चेलाहरूले पावललाई यरूशलेममा पाइला नटेक्नू भनी बारम्बार भने। ५ त्यहाँबाट हिंड्ने बेला भएपछि हामी निस्केर आफ्नो बाटो लाग्यौं; तर स्त्री, केटाकेटीलगायत सबै चेलाहरू हामीलाई पुऱ्याउन सहरबाहिरसम्मै आए। अनि समुद्री किनारामा घुँडा टेकेर हामीले प्रार्थना गऱ्यौं ६ र एकअर्कालाई बिदाइ गरेपछि हामी जहाज चढ्यौं अनि तिनीहरूचाहिं आफ्नो घर फर्के। ७ त्यसपछि टायरबाट समुद्री यात्रा गरेर हामी टोलेमाइस पुग्यौं र त्यहाँ भाइहरूलाई अभिवादन गरेपछि एक दिन तिनीहरूसितै बस्यौं। ८ भोलिपल्ट आफ्नो यात्रा जारी राख्दै हामी सिजरिया पुग्यौं र त्यहाँ फिलिप नाम गरेका प्रचारकको घरमा गयौं र त्यहीं बस्यौं। यरूशलेममा प्रेषितहरूले चुनेका सात जना पुरुषमध्ये एक फिलिप थिए ९ र तिनको चार जना कुमारी छोरी थिए अनि तिनीहरूले भविष्यवाणी गर्थे। १० हामीले त्यहाँ निकै दिन बिताएपछि अगाबस नाम गरेका एक जना भविष्यवक्ता यहूदियाबाट त्यहाँ आए। ११ अनि हामीकहाँ आएर उनले पावलको पटुका लिए। त्यसपछि आफ्नो हातखुट्टा त्यसले बाँधेर यसो भने: “पवित्र शक्ति यसो भन्छ, ‘यो पटुका जसको हो, उसलाई यरूशलेममा यहूदीहरूले यसरी नै बाँध्नेछन्‌ र अन्यजातिका मानिसहरूको हातमा सुम्पिदिनेछन्‌।’ ” १२ यो सुनेर हामीले तिनलाई यरूशलेम नजान बिन्ती गर्न थाल्यौं अनि त्यस ठाउँमा हुनेजति सबैले पनि त्यसै गरे। १३ तर पावलले यस्तो जवाफ दिए: “यसरी रुवाबासी गरेर तपाईंहरू किन मेरो मनलाई कमजोर बनाउन खोज्नुहुन्छ? तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्, प्रभु येशूको नामको खातिर म यरूशलेममा कैदी हुन मात्र होइन तर मर्नसमेत तयार छु।” १४ पावललाई मनाउन नसकेपछि “यहोवाको इच्छाअनुसारै होस्” भन्दै हामीले तिनको निर्णय स्वीकाऱ्यौं। १५ ती दिनपछि हामीले यात्राका लागि तयारी गऱ्यौं अनि यरूशलेमतर्फ लाग्यौं। १६ तर हामीलाई साइप्रसका मनासोनको घरसम्म पुऱ्याउन सिजरियाबाट केही चेलाहरू हामीसितै आए, किनकि हामी तिनकै घरमा बस्नेवाला थियौं। मनासोन, सुरु-सुरुमा चेला बनेकाहरूमध्ये एक थिए। १७ हामी यरूशलेम पुग्दा भाइहरूले खुसीसाथ हाम्रो स्वागत गरे। १८ भोलिपल्ट हामीलाई लिएर पावल याकूबकहाँ गए; त्यहाँ अरू सबै एल्डरहरू पनि भेला भएका थिए। १९ पावलले तिनीहरूलाई अभिवादन गरे अनि आफूले गरेको सेवाद्वारा परमेश्वरले अन्यजातिका मानिसहरूबीच के-कस्ता कामहरू गर्नुभयो भनी सविस्तार सुनाउन थाले। २० यो सुनेर तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गर्न थाले अनि पावललाई भने: “हे भाइ, हजारौंको सङ्ख्यामा यहूदीहरू येशूका अनुयायी बनेका त तपाईंले देख्नुभएकै छ। अनि तिनीहरू सबै जोसिलो भएर मोशाको व्यवस्था पालन गर्छन्‌। २१ अनि तिनीहरूले के हल्ला सुनेका छन्‌ भने, आफ्नो सन्तानको खतना गर्नुपर्दैन अनि पहिलेदेखि चलिआएको रीतिरिवाज मान्नुपर्दैन भनेर तपाईं भन्नुहुन्छ अरे अनि यस्तो कुरा गरेर तपाईंले अन्यजातिमाझ छरिएर बसेका यहूदीहरूलाई मोशाको व्यवस्थाविपरीत कुराहरू सिकाएर धर्मत्याग फैलाउँदै हुनुहुन्छ अरे। २२ अब कसरी कुरा मिलाउने? किनकि तपाईं यरूशलेम आउनुभएको छ भनेर तिनीहरूले जसरी भए पनि सुनिहाल्नेछन्‌। २३ अब हामीले भनेजस्तै तपाईं गर्नुहोस्: भाकल गरेर बसेका चार जना पुरुष हामीसित छन्‌। २४ तिनीहरूलाई आफूसित लैजानुहोस र मोशाको व्यवस्थाअनुसार तिनीहरूसँगसँगै आफूलाई शुद्ध पार्नुहोस् अनि आफ्नै खर्चमा तिनीहरूको कपाल खौराउनुहोस्। तपाईंले यसो गर्नुभयो भने तपाईंको विषयमा जे-जस्तो सुनियो, त्यो फोस्रो हल्ला मात्र रहेछ भनेर सबैले थाह पाउनेछन्‌ र तपाईं आफै पनि मोशाको व्यवस्था पालन गर्दै ठीक बाटोमा हिंडिरहनुभएको छ भनेर तिनीहरूले देख्नेछन्‌। २५ जहाँसम्म येशूको अनुयायी बनिसकेका अन्यजातिहरूको कुरा छ, मूर्तिलाई बलि चढाइएका थोकहरू, रगत, गला अँठ्याएर मारेको जनावरको मासु र अवैध यौनसम्बन्धबाट अलग बसनू भनेर हामीले आफ्नो निर्णय लेखेर तिनीहरूलाई पठाइसकेका छौं।” २६ तब भोलिपल्ट पावलले ती मानिसहरूलाई आफूसित लगे र मोशाको व्यवस्थाबमोजिम तिनीहरूसँगसँगै आफूलाई शुद्ध पारे। त्यसपछि, शुद्धीकरणको विधि कहिले सिद्धिन्छ अनि कुन दिन पुजारीले तिनीहरू हरेकको निम्ति बलिदान चढाउनुपर्ने हो, त्यो खबर गर्न तिनी मन्दिरमा गए। २७ अब सात दिन पूरा हुनै लाग्दा तिनलाई मन्दिर परिसरमा देखेर एसियाका यहूदीहरूले भीडलाई उचाल्न थाले अनि पावललाई पक्रेर यसो भने: २८ “हे इस्राएलका मानिसहरू हो, हामीलाई मदत गर्नुहोस्! हाम्रो जाति, हाम्रो व्यवस्था अनि यस ठाउँको विरुद्धमा जताततै सबैलाई सिकाएर हिंड्ने मानिस यही हो। यहाँसम्म कि यसले ग्रीकहरूलाई मन्दिरभित्र हुलेर यस पवित्र ठाउँलाई समेत बिटुलो पारेको छ।” २९ तिनीहरूले एफिससका त्रोफिमसलाई तिनीसँगै बजारमा देखेको हुनाले पावलले उनलाई मन्दिरभित्र ल्याए होलान्‌ भन्ठानिरहेका थिए। ३० तब पूरै सहरभरि खैलाबैला मच्चियो र मानिसहरू भेला भएर मन्दिरतिर दौडे। त्यसपछि तिनीहरूले पावललाई समातेर घिस्याउँदै मन्दिरबाहिर ल्याए र तुरुन्तै ढोका थुने। ३१ तिनीहरूले पावललाई मार्न खोजिरहेका थिए। तर त्यतिनै बेला, सारा यरूशलेमभरि गोलमाल मच्चिरहेको छ भन्ने खबर सेनापतिकहाँ* पुग्यो। ३२ अनि तुरुन्तै सिपाहीहरू अनि सैनिक अफिसरहरू* लिएर तिनी त्यसतर्फ दौडे। सेनापति र सिपाहीहरूलाई देखेर भीडले पावललाई कुट्न छोड्यो। ३३ तब नजिक गएर सेनापतिले पावललाई समाते अनि तिनलाई दुई वटा साङ्लाले बाँध्ने हुकुम दिए। त्यसपछि उनले तिनी को हुन्‌ अनि तिनले के गरे भनेर सोधपुछ गर्न थाले। ३४ तर भीडमा हुनेहरूमध्ये कसैले एक थरी अनि अर्कोले अर्कै थरी जवाफ दिंदै कराउन थाले। भीडको होहल्लाले गर्दा उनले केही पनि बुझ्न सकेनन्‌; त्यसैले पावललाई छाउनीमा लैजाने हुकुम गरे। ३५ तर तिनी भऱ्याङ उक्लन थालेपछि भीड यति हिंस्रक भयो कि सिपाहीहरूले तिनलाई बोकेर लैजानुपऱ्यो। ३६ किनकि भीडका भीड मानिसहरू “त्यसलाई मार्!” भनेर चिच्याउँदै पछि लागिरहेका थिए। ३७ तब सिपाहीहरूले आफूलाई छाउनीभित्र छिराउनै लाग्दा पावलले सेनापतिलाई सोधे: “के म तपाईंलाई केही भन्न सक्छु?” उनले जवाफ दिए: “के तिमीलाई ग्रीक बोल्न आउँछ? ३८ के तिमी त्यही मिश्री होइनौ, जो केही समयअघि विद्रोह मच्चाउँदै चार हजार हतियारधारी लिएर उजाड-स्थानतिर पसेका थियौ?” ३९ तब पावलले यस्तो जवाफ दिए: “वास्तवमा म यहूदी हुँ र सिलिसियाको टार्ससको नागरिक हुँ, जुन कुनै चानचुने सहर होइन। त्यसैले म बिन्ती गर्छु, मानिसहरूसामु मलाई बोल्न दिनुहोस्।” ४० उनले अनुमति दिएपछि पावल भऱ्याङमा उभिए अनि हातले इशारा गर्दै मानिसहरूलाई शान्त हुन आग्रह गरे। सबै जना शान्त भएपछि तिनले हिब्रू भाषामा यसरी भाषण दिए:
^ प्रे २१:३१ * वा, “हजार जना सिपाहीको नाइकेकहाँ।”
^ प्रे २१:३२ * वा, “सय जना सिपाहीका नाइकेहरू।”